Brezila : Esorina Ny Filoha, Ny “Fianakavian’ny Mpanjaka” Te-Hilalao Ny “Lalaon’ny Seza Fiandrianana” Ho Tena Izy · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 17 Jona 2016 17:35 GMT
Tamin'ny herinandro lasa, nizara lahatsary izay vetivety foana dia nalaza, tao pejiny Facebook ôfisialy ny Printsy Don Rafael (izay laharana faha-efatra amin'ny andalam-pifandimbiasana, raha toa ka mbola fitondrana mpanjaka no rafi-pitondrana any Brezila). Ao amin'ilay lahatsary, arahabain'i Rafael ireo “mpandàla ny fitondrana mpanjaka” ao amin'ny firenena ary amafisiny fa ” resaka fotoana sisa dia hiverina ny rafitra fitondrana mpanjaka”. Nanampy avo telo heny ny isan'ireo mpanaraka ny Facebook-n-dRafael ilay lahatsary, niaraka tamin'ny hita maherin'ny 400.000, nanomboka tamin'ny 6.000 ka hatramin'ny 20.000 eo ho eo , tao anatin'ny andro vitsy.
Nivonona ny handray an'i Dom Bertrand de Orleans e Bragança niaraka tamin'ny rahalahiny Dom Luis tao amin'ny fandaharany i Mariana Godoy– izy roa ireo dia samy taranak'i Dom Pedro II, laharana faharoa sy ny voalohany amin'ny andalam–pifandimbiasan'izay tokony hiakatra eo amin'ny seza fiandrianana tsy mbola hita ho antenaina — izay toa mitrandraka ny fomba hahazoana tombontsoa amin'ny hetsik'ireo mpitahiry ny fombandrazana ao amin'ny firenena mba hampiharihariana ilay raharahany. Narovan'i D.Bertrand, tao amin'ilay adihevitra, ilay fanonganam-panjakana nataon'ny miaramila tamin'ny 1964, izay nametraka an'i Brezila tao anatin'ny fitondrana jadona nandritra ny 21 taona, ny zo hanana fanànana manokana ambonin'ny zavatra rehetra sady, ambany fanekena ny “lalàn'Andriamanitra”, nanameloka ny fiarahan'ny samy lahy sy ny samy vavy ary ireo “tombontsoa” rehetra omena ny LGBT.
Raha toa ka hafahafa tamin'ny maro tany Brezila ny fisainana hoe fiverenana amin'ny fitondran'ny mpanjaka, dia mihahita tsikelikely amin'ny hetsika an-dàlambe ho fanoherana ny Antokon'ny Mpiasa nanomboka tamin'ny faran'ny taona 2014 ny sainam-panjakana fahiny. Dom Bertrand ( izay mpandova seza fiandrianana Breziliana laharana voalohany amin'ny andalana fifandimbiasana raha araky ny filazana mampisalasala nataon'ny sampana Vassourasn-n'ny fianakaviana) dia nilaza tamim-pireharehana fa nivondrona tsy nasiam-panentanana ireo mpomba azy ireo. “Leo ny repoblika ny olona,” hoy ny izy manizingizina.
Talohan'ny fifidianana filoham-pirenena tamin'ny 2014, nanao filazana niresaka ny ” zo natoraly”, nitanisa an-dry Cicero, Aristote, ary ny Baiboly sy nandrisika ireo mpandàla fitondran'ny mpanjaka tsy hifidy ireo” mpifaninana izay manohitra ny fampianarana [momba ny zo natoraly]” na ho an”ireo antoko izay maniratsira ny Lalàn'Andriamanitra” ny taratasy nosoratan'i D Luis, navoaka tao amin'ny haban-tranonkala monarchy.com.
Nazavain'i Bertrand tao amin'ny resadresaka nifanaovany tamin'ny gazety Folha de São Paulo, ny antony nanapahan'ny fianakaviany hevitra hanaraka ny hetsika ara-politika amin'izao fotoana izao :
Tamin'ny 1993, nanararaotina ny herisetra vokatry ny fizotry ny fanonganana filoha iray hafa, dia nasiana fitsapankevi-bahoaka nanontaniana ny Breziliana ny momba izay rafitra fitondrana tiany. 10,2 isanjaton'ny vahoaka ihany no nanohana ireo mpandàla fitondran'ny mpanjaka izay nanana fotoana hiarovana ny heviny tamin'ny fahitalavitra. Mbola tsy miova io toe-javatra io hatramin'izao. 33 isanjaton'ny vola tokony ho tratrarina fotsiny amin'ny tanjona 5.000 BRL(1.470 dolara) no azo tamin'ny fanentanana fanangonam-bola tamin'ny olona mba hamatsiana ny ” fampahafantarana ny momba ny rafitra fitondran'ny mpanjaka amin'ny aterineto”.
Mety hanomboka ihany ny fandalàna ny fitondran'ny mpanjaka any Brezila, na izany aza. Tamin'ny volana May teo, nandray sosokevitra mba hamerenana ny fitondram-panjakana parlemantera ho vahaolana hamaranana ny ” rafi-pitondrana misy filoha lò sy feno kolikoly ” ananan'i Brezila ny Loholon'ny firenena. Navoakan'ny Loholona tamin'ny tranonkalany io sosokevitra io, manana hatramin'ny volana Septambra 2017 ny olona mba hanekena ilay lahatsoratra. Hatreto, mpanohana goavana 18 no azony.